Nissan ကားဝယ်ရင်း Nissan Sunny ကားသစ်ကြီးကို ကံထူးနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို ရယူလိုက်ရအောင်
27 Feb 2018 . 4:13 PM
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Nissan မော်တော်ယာဉ်တွေကို တရားဝင်ရောင်းချနေတဲ့ Tan Chong Motor (Myanmar) Co., Ltd. က မလေးရှားမှာရှိတဲ့ Tan Chong Motor Holdings Bhd. ရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ အဆိုပါ Tan Chong Motor (Myanmar) Co., Ltd ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Nissan Sunny ကားအပါအဝင် အခြားသော ဆုမဲတွေကို Lucky Draw ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခု Lucky Draw ပွဲကြီးကို ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းကနေ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အခုလာမယ့် ၃၁ ရက်နေ့ မတ်လ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ရပ်ဆိုင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု Lucky Draw ဟာ Nissan မော်တော်ကားတွေဖြစ်တဲ့ Nissan Altima ၊ X-Trail ၊ Navara ၊ Urvan ၊ Civilian နဲ့ Sunny ကားတွေကို ဝယ်ယူတာနဲ့ အကျူံးဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ တလတစ်ခါ Monthly Lucky Draw တွေနဲ့ အတူ အခု မတ်လကုန်မှာ Grand Lucky Draw ကို ကံစမ်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Nissan ရဲ့ Monthly Draw Prizes တွေကို လစဉ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အခုအချိန်မှာတော့ ကာစတမ်မာတွေဟာ အခုအချိန်မှာ Home Theater စနစ်တွေ၊ LED TV တွေနဲ Nissan Sunny 1.5MT မော်တော်ကားအသစ်ကြီးပါဝင်တဲ့ Grand Lucky Draw ကြီးကို စောင့်မျှော်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် တကယ်လို့ Nissan မော်တော်ယာဉ်တွေကို ဝယ်ယူဖို့စိတ်ကူးနေတယ်ဆိုရင် အခုပဲ ဒီ “BUY & WIN” Campaign မကုန်ဆုံးခင်မှာ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် Nissan Sunny ကားသစ်ကြီးကို ကံထူးနိုင်တဲ့အတွက် အခုပဲ လာရောက်ဝယ်ယူကြလိုက်ဦးနော်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ Nissan မျောတျောယာဉျတှကေို တရားဝငျရောငျးခနြတေဲ့ Tan Chong Motor (Myanmar) Co., Ltd. က မလေးရှားမှာရှိတဲ့ Tan Chong Motor Holdings Bhd. ရဲ့ ကုမ်ပဏီခှဲဖွဈပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ အဆိုပါ Tan Chong Motor (Myanmar) Co., Ltd ဟာ မွနျမာနိုငျငံမှာ Nissan Sunny ကားအပါအဝငျ အခွားသော ဆုမဲတှကေို Lucky Draw ပွိုငျပှဲ ကငျြးပနတောပဲဖွဈပါတယျ။
အခု Lucky Draw ပှဲကွီးကို ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျနေ့၊ ၂၀၁၇ ခုနှဈတုနျးကနေ စတငျခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ အခုလာမယျ့ ၃၁ ရကျနေ့ မတျလ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ ရပျဆိုငျးတော့မှာဖွဈပါတယျ။ အခု Lucky Draw ဟာ Nissan မျောတျောကားတှဖွေဈတဲ့ Nissan Altima ၊ X-Trail ၊ Navara ၊ Urvan ၊ Civilian နဲ့ Sunny ကားတှကေို ဝယျယူတာနဲ့ အကြူံးဝငျမှာဖွဈပွီးတော့ တလတဈခါ Monthly Lucky Draw တှနေဲ့ အတူ အခု မတျလကုနျမှာ Grand Lucky Draw ကို ကံစမျးပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
Nissan ရဲ့ Monthly Draw Prizes တှကေို လစဉျပေးခဲ့ပွီးဖွဈတဲ့အတှကျ အခုအခြိနျမှာတော့ ကာစတမျမာတှဟော အခုအခြိနျမှာ Home Theater စနဈတှေ၊ LED TV တှနေဲ Nissan Sunny 1.5MT မျောတျောကားအသဈကွီးပါဝငျတဲ့ Grand Lucky Draw ကွီးကို စောငျ့မြှျောနကွေပွီဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီအတှကျ တကယျလို့ Nissan မျောတျောယာဉျတှကေို ဝယျယူဖို့စိတျကူးနတေယျဆိုရငျ အခုပဲ ဒီ “BUY & WIN” Campaign မကုနျဆုံးခငျမှာ ဝယျယူမယျဆိုရငျ Nissan Sunny ကားသဈကွီးကို ကံထူးနိုငျတဲ့အတှကျ အခုပဲ လာရောကျဝယျယူကွလိုကျဦးနျော။